2017-11-21 | तितोपाटी डट कम
तितोपाटी डट कम - भनिन्छ, जव प्रहरीले डण्डा चलाउँछ, लाटो मानिस पनि बोल्न थाल्छ। तर प्रहरीको डरले भित्ता पनि बोल्न थाल्यो भने…! सुन्दा यो कुरा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ। तर तपाइँ यो समाचार पढ्दै जाँदा वास्तविकता आफैं खुल्दै जाने छ। त्यसो त हामीले घर, पसल वा ठूलो महलको भित्तोभित्र करोडौंका खजाना भेटिएको समाचार सुन्दै आएका छौं।
तर यस्तै एउटा विषयमा प्रहरीले खजानासँगै यस्तो चीज फेला पार्यो जसलाई देख्ने वित्तिकै प्रहरीले घरधनीलाई पक्राउ गर्यो। यो घटनामा एक युवती पनि सामेल भएकी थिइन्।
काठमाडौंमा घर बनाउँदै हुनुहुन्छ ? हिजोआज कति लाग्छ खर्च ? (भिडियो रिपोर्ट)
गुडिरहेको कारमा सेक्स गर्दा गयो ज्यान (भिडियो रिपोर्ट)
यो घटना फ्लोरिडाको मियामी सहरको हो। जहाँ एक घरमा प्रहरीेले छापा मार्यो। सो क्रममा प्रहरीलाई एक खुफिया भित्ताको विषयमा जानकारी प्राप्त भयो। त्यसपछि जे भयो त्यो देखेर प्रहरीको होस नै उड्यो। सो घरको भित्ता पछाडि बनाइएका खुफिया कोठाबाट प्रहरीले २४ बाल्टी फेला पार्यो। ती बाल्टी खोल्ने वित्तिकै प्रहरीको होश उड्यो। किनभने ती बाल्टीभित्र करोडौं नोटका बल्डल थिए। त्यतिमात्र होइन ती बाल्टीभित्र गाँजा र गाँजाको विउ पनि भेटियो।
अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमका अनुसार घर मालिक र दुई आरोपी दिदी भाइ लुइस र सलमा थिए। जसमाथि लागु औषध कारोवार गरेको आरोप लागेको थियो। तर प्रमाण जुटाउन प्रहरीले सकेको थिएन। त्यतिबेला प्रहरीले अर्को भित्तालाई शंका गर्दै भित्ता फुटाउने निर्णय गर्यो। भित्ता फुटाएपछि सो धन्दाको पर्दाफास भयो।
बाल्टीमा फेला परेको पैसा दुवै दिदी भाइले गाँजा बेचेर कमाएका थिए। प्रहरीले ती राता रंगका बाल्टीबाट एक अरब ५५ हजार रुपैयाँ बरामद गरेको छ। सो घरबाट प्रहरीले १ करोड ६ लाख रुपैयाँको छुट्टै थैली फेला पारेको थियो। प्रहरीले मारेको सबैभन्दा ठूलो छापा मध्येको यो एक हो।